Writing Week (4) - Smart OET Training Centre
Writing Week (4)
Categories: Online Writing
Week4– Day 1 Plan
Day 1 Lessons ➡ Day 1 တွင်လေ့လာရမည့် သင်ခန်းစာများမှာ Capitalization Capitalization Exercise Sample Letters (5) Letter Writing Exercises (6) ➡ Day 1 တွင် Week3Day3တွင် လေ့ကျင့်ထားသော Letter ကို ရေးထားသော Sample Letter ကို လေ့လာရပါမည် ➡ Capitalization အကြောင်းကိုလဲ လေ့လာရပါမည် ➡ Letter အသစ် ၁စောင်ကိုလဲ ထပ်လေ့ကျင့်ရပါမည် ➡ Letter များကို လွယ်ကူသော ပုံစံမှ တဖြည်းဖြည်း Level မြှင့်ပေးထားသောကြောင့် ပုံမှန်ရေးသားလေ့ကျင့်ရန် လိုအပ်ပါသည်
Sample Letter (5)
🔸 Video ထဲတွင် Letter (5) ကို ရေးထားသော Sample answer ကို ရှင်းပြပေးထားပါသည် 🔸 ပေးထားသော Sample letter ကိုဖတ်ပြီးမှ Explanation Video ကို ကြည့်ပေးပါ 🔸 Sample Letter pdf file ကိုလဲ download လုပ်ထားနိုင်ပါသည် DOWNLOAD Sample Letter (5) Explanation 🔸Duration = 14 minutes 🔸 Video ကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ စာလုံးတွေ ကြည်အောင် Resolution ကို မြှင့်လို့ ရပါတယ် 🔸 Mark Complete ကိုနှိပ်ပြီး ရှေ့သို့ ဆက်သွားနိုင်ပါသည်
➡ Letter ရေးရာတွင် ဘယ်စာလုံးတွေကို Capital letter / Upper case အကြီးနဲ့ ရေးပြီး ➡ ဘယ်စာလုံးတွေကို small letter / lower case အသေးနဲ့ရေးမလဲဆိုတာကို လေ့လာရပါမယ် Capitalization Rules 🔸Duration = 14 minutes 🔸 Video ကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ စာလုံးတွေ ကြည်အောင် Resolution ကို မြှင့်လို့ ရပါတယ် 🔸 Mark Complete ကိုနှိပ်ပြီး ရှေ့သို့ ဆက်သွားနိုင်ပါသည်
➡ ပေးထားသော ဝါကျများတွင် စာလုံး ကြီးနှင့် စာလုံးသေး မှားရေးထားသော Word များကို ရွေးထုတ်ပါ ➡ Phone ဆိုလျှင် လက်နှင့် ၊ Computer တွင် Mouse နှင့် မှားသည်ထင်သော စာလုံးကို နှိပ်ပြီး ရွေးနိုင်ပါသည် ➡ ရွေးပြီးလျှင် Check နှင့် Show solution ခလုတ်များကို နှိပ်၍ အဖြေတိုက်နိုင်ပါသည် Capitalization Exercise (1) Capitalization Exercise (2) 🔸 လေ့ကျင့်ခန်း ၂ခုလုံးပြီးလျှင် Mark complete ကိုနှိပ်ပြီး ရှေ့ဆက်သွားနိုင်ပါသည်
🔸 ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွင် Letter တစ်စောင်ကို အစအဆုံး ရေးရပါမည် 🔸 ပေးထားသော Case Notes ကို ဖတ်ပြီး Letter ကို ရေးပါ 🔸 Letter pdf file ကိုလဲ download လုပ်ထားနိုင်ပါသည် DOWNLOAD Letter ကို အစ အဆုံး ရေးပြီး မိမိအဆင်ပြေသည့်နည်းနှင့် Upload လုပ်ပေးပါ 🔸 Computer Microsoft Word file နှင့် တင်လျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည် 🔸 လက်ရေးနှင့် ရေးထားသော Letter များကိုလဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး တင်နိုင်ပါသည် 🔸 သို့သော် လက်ရေးပီသမှုတော့ ရှိဖို့လိုပါသည်။ လက်ရေးနှင့်ရေးလျှင် တစ်ကြောင်းခြားလောက်ရေး ပေးပါက ပိုအဆင်ပြေပါသည် 🔸 File ... Read more Letter (6)
Week4– Day 1 Summary
Congratulation! You have completed Day 1 Lessons. Summary of Day 1 Lessons ➡ Day 1 တွင်လေ့လာခဲ့သော သင်ခန်းစာများမှာ Capitalization Capitalization Exercise Sample Letters (5) Letter Writing Exercises (6) ➡ Capitalization အကြောင်းကိုလဲ လေ့လာခဲ့ပြီးသောကြောင့် Letter ရေးရာတွင် ထဲ့စဉ်းစားရပါမည် ➡ Letter များကို လွယ်ကူသော ပုံစံမှ တဖြည်းဖြည်း Level မြှင့်ပေးထားသောကြောင့် ပုံမှန်ရေးသားလေ့ကျင့်ရန် လိုအပ်ပါသည် ➡ Letter များကို ရေးပြီး အချိန်မှန်ထပ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ သို့မှသာ ပုံမှန် Writing ရေးဖြစ်ပြီး Feedback ... Read more Week4– Day 1 Summary
Week4– Day2Plan
Day2Lessons ➡ Day2တွင်လေ့လာရမည့် သင်ခန်းစာများမှာ Conjunctions Conjunctions Exercise Sample Letters (6) Letter Writing Exercise (7) ➡ Day2Conjunctions အကြောင်းကို လေ့လာရပါမည် ➡ Letter အသစ် ၁စောင်ကိုလဲ ထပ်လေ့ကျင့်ရပါမည် ➡ Letter များကို ပုံမှန်ရေးသားလေ့ကျင့်ရန် လိုအပ်ပါသည်
Sample Letter (6)
🔸 Video ထဲတွင် Letter (6) ကို ရေးထားသော Sample answer ကို ရှင်းပြပေးထားပါသည် 🔸 ပေးထားသော Sample letter ကိုဖတ်ပြီးမှ Explanation Video ကို ကြည့်ပေးပါ 🔸 Sample Letter pdf file ကိုလဲ download လုပ်ထားနိုင်ပါသည် DOWNLOAD Sample Letter (6) Explanation 🔸Duration = 12 minutes 🔸 Video ကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ စာလုံးတွေ ကြည်အောင် Resolution ကို မြှင့်လို့ ရပါတယ် 🔸 Mark Complete ကိုနှိပ်ပြီး ရှေ့သို့ ဆက်သွားနိုင်ပါသည်
➡ Letter ရေးရာတွင် အသုံးများသော Conjunctions များကို လေ့လာရပါမည် Conjunctions 🔸Duration = 28 minutes 🔸 Video ကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ စာလုံးတွေ ကြည်အောင် Resolution ကို မြှင့်လို့ ရပါတယ်
Conjunctions Exercise (1) ➡ ပေးထားသော ဝါကျများတွင် မှန်ကန်သော Conjunction များကို ရွေးထဲ့ပါ ➡ အဖြေရေးပြီးလျှင် Check နှင့် Show solution ခလုတ်များကို နှိပ်၍ အဖြေတိုက်နိုင်ပါသည် Conjunctions Exercise (2) ➡ ပေးထားသော ဝါကျများတွင် မှန်ကန်သော Conjunction များကို ရွေးထဲ့ပါ ➡ Phone ဆိုလျှင် လက်နှင့် ၊ Computer တွင် Mouse နှင့် မှန်သော စာလုံးကို နှိပ်ပြီး ကွက်လပ်ထဲသို့ ရွှေ့နိုင်ပါသည် ➡ ရွေးပြီးလျှင် Check နှင့် Show solution ခလုတ်များကို နှိပ်၍ အဖြေတိုက်နိုင်ပါသည် 🔸 ... Read more Conjunctions Exercise
🔸 ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွင် Letter တစ်စောင်ကို အစအဆုံး ရေးရပါမည် 🔸 ပေးထားသော Case Notes ကို ဖတ်ပြီး Letter ကို ရေးပါ 🔸Case Notes တွင်သုံးထားသော symbols များကို သတိပြုမှတ်သားပါ 🔸 မျဉ်းစောင်း ( / ) အနောက် နံပါတ်သည် Reference လုပ်သော အချိန်အတိုင်းအတာကို ကိုယ်စားပြုပြီး အရှေ့ နံပါတ်သည် ပြောချင်သော ပမာဏကို ကိုယ်စားပြုသည် e.g.2/ 24 =2hours 2/7=2days2/ 52 =2weeks2/ ... Read more Letter (7)
Week4– Day2Summary
Congratulation! You have completed Day2Lessons. Summary of Day2Lessons ➡ Day2တွင်လေ့လာခဲ့သော သင်ခန်းစာများမှာ Conjunctions Conjunctions Exercise Sample Letters (6) Letter Writing Exercise (7) ➡ Conjunctions များအကြောင်းကို လေ့လာခဲ့ပြီးသောကြောင့် Letter ရေးရာတွင် ထဲ့အသုံးပြုသင့်ပါသည် ➡ Letter များကိုလဲ ပုံမှန်ရေးသားလေ့ကျင့်ရန် လိုအပ်ပါသည် ➡ ဤသင်ခန်းစာများကိုလည်း ကြေညက်အောင် အချိန်မရွေး ထပ်ခါလေ့ကျင့်၍ ရပါသည် ➡ အောက်ဖက်မှ Mark Complete ကို နှိပ်၍ ထွက်နိုင်ပါသည်
Week4– Day3Plan
Day3Lessons ➡ Day3တွင်လေ့လာရမည့် သင်ခန်းစာများမှာ Linking Words Linking Words Exercise Sample Letters (7) Letter Writing Exercise (8) ➡ Day3Linking Words များအကြောင်းကို လေ့လာရပါမည် ➡ Letter အသစ် ၁စောင်ကိုလဲ ထပ်လေ့ကျင့်ရပါမည်
➡ Letter ရေးရာတွင် အသုံးများသော Linking Words များကို လေ့လာရပါမည် Linking Words 🔸Duration = 14 minutes 🔸 Video ကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ စာလုံးတွေ ကြည်အောင် Resolution ကို မြှင့်လို့ ရပါတယ်
Linking Words Exercise (1) ➡ ပေးထားသော ဝါကျများတွင် မှန်ကန်သော Linking Words များကို ရွေးထဲ့ပါ ➡ Phone ဆိုလျှင် လက်နှင့် ၊ Computer တွင် Mouse နှင့် မှန်သော စာလုံးကို နှိပ်ပြီး ကွက်လပ်ထဲသို့ ရွှေ့နိုင်ပါသည် ➡ ရွေးပြီးလျှင် Check နှင့် Show solution ခလုတ်များကို နှိပ်၍ အဖြေတိုက်နိုင်ပါသည် Linking Words Exercise (2) ➡ ပေးထားသော ဝါကျများတွင် မှန်ကန်သော Linking Words များကို ရွေးထဲ့ပါ ➡ Phone ဆိုလျှင် လက်နှင့် ၊ Computer တွင် ... Read more Linking Words Exercise
Sample Letter (7)
🔸 Video ထဲတွင် Letter (7) ကို ရေးထားသော Sample answer ကို ရှင်းပြပေးထားပါသည် 🔸 ပေးထားသော Sample letter ကိုဖတ်ပြီးမှ Explanation Video ကို ကြည့်ပေးပါ 🔸 Sample Letter pdf file ကိုလဲ download လုပ်ထားနိုင်ပါသည် DOWNLOAD Sample Letter (7) Explanation 🔸Duration = 15 minutes 🔸 Video ကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ စာလုံးတွေ ကြည်အောင် Resolution ကို မြှင့်လို့ ရပါတယ် 🔸 Mark Complete ကိုနှိပ်ပြီး ရှေ့သို့ ဆက်သွားနိုင်ပါသည်
🔸 ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွင် Letter တစ်စောင်ကို အစအဆုံး ရေးရပါမည် 🔸 ပေးထားသော Case Notes ကို ဖတ်ပြီး Letter ကို ရေးပါ 🔸 Letter pdf file ကိုလဲ download လုပ်ထားနိုင်ပါသည် DOWNLOAD Letter ကို အစ အဆုံး ရေးပြီး မိမိအဆင်ပြေသည့်နည်းနှင့် Upload လုပ်ပေးပါ 🔸 Computer Microsoft Word file နှင့် တင်လျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည် 🔸 လက်ရေးနှင့် ရေးထားသော Letter များကိုလဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး တင်နိုင်ပါသည် 🔸 သို့သော် လက်ရေးပီသမှုတော့ ရှိဖို့လိုပါသည်။ လက်ရေးနှင့်ရေးလျှင် တစ်ကြောင်းခြားလောက်ရေး ပေးပါက ပိုအဆင်ပြေပါသည် 🔸 ဓါတ်ပုံရိုက်လျှင် ... Read more Letter (8)
Week4– Day3Summary
Congratulation! You have completed Day3Lessons. Summary of Day3Lessons ➡ Day3တွင်လေ့လာခဲ့သော သင်ခန်းစာများမှာ Linking Words Linking Words Exercise Sample Letters (7) Letter Writing Exercise (8) ➡ Linking Words များအကြောင်းကို လေ့လာခဲ့ပြီးသောကြောင့် Letter ရေးရာတွင် ထဲ့အသုံးပြုသင့်ပါသည် ➡ သင်ခန်းစာများကို ကြေညက်အောင် အချိန်မရွေး ထပ်ခါလေ့ကျင့်၍ ရပါသည် ➡ အောက်ဖက်မှ Mark Complete ကို နှိပ်၍ ထွက်နိုင်ပါသည်
© 2021 Smart OET Training Centre